Musharax Madaxweyne Maxamud Khalif Jabiye oo soo dhaweeyay goaankii barlamanka Puntland ka qaateen doorashada Puntland • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Musharax Madaxweyne Maxamud Khalif Jabiye oo soo dhaweeyay goaankii barlamanka Puntland ka qaateen doorashada Puntland
Musharax Madaxweyne Maxamud Khalif Jabiye oo soo dhaweeyay goaankii barlamanka Puntland ka qaateen doorashada Puntland
August 15, 2018 - By: Mohamud Nadif
Maxamuud Khaliif Xasan (Eng. Jebiye) oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Puntland ayaa war kobaan oo uu baahiyay waxa uu ku sheegay in uu si mug leh u soo dhawaynayo goaanka golaha baarlaamanka puntland ay maanta kasoo saareen arimaha dooraashooyinka ”
Waxaan si mug iyo miisaan leh u soo dhaweynayaa go’aanka ay maanta Garoowe ka soo saareen Xildhibaanada Golaha Wakiilada ee Puntland ee Baarlamaanka afaraad ee Puntland yeelato 2014-2019. Go’aanka Xildhibaanada ayaa ka koobnaa lix qodob oo ay wax ga bedeleen lifaaqii hore ee doorashada lagu galay ee dhigaayey sideed qodob kuwaas oo qaarkood laga saarey qaarna la bedalay, waxaana ugu muhumsanaa qodobada lifaaqa Baarlamaanka ee doorashada lagu gelaayo.
1. In Baarlamaanka uu bedalayo Baarlamaan kale
2. In Doorashada Madaxweynuhu ku dhacdo xiligii loo asteeyey 8.1.2019
3. In Guddiga kumeel-gaarka ah ee Doorashooyinka Puntland shaqadooda sii wataan oo aan la kala diri karin.
Go’aanka Xildhibaanaddu waxa uu muujinayaa xilkasnimo, iyo biseyl siyaasadeed waxayna Puntland ka badbaadinayaan in si sharciga aan waafaqsaneyn Baarlamaanka loo kala diro, lana abuuro jawi faaruq ah (Vacuum) kaas oo awoodu ay ku ururto hal gacan, iyada o aysan dhisneyn maxkamadii dastuuriga ahayd. Gobolada iyo Beelaha Puntland waxaan ugu baaqayaa in ay soo xulaan xildhibaano xilkas ah, garan kara Puntland labaatan sano kadib halka ay joogto iyo sidey ku habbooneyd in ay maanta tahay” ayuu yuri musharax Jebiye.
Ugu danbayn musharax jebiye waxa uu Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kula dardaarmey in uu qabto doorasho xalaal ah waxa uuna fariin u diray shacabka puntland ”
Si taa lamid ah waxaan ugu baaqayaa Madaxweynaha xilku ka sii dhamaanayo in uu qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo taariikhdu ku xusto, muddada kala-guurka ah uu ilaaliyo hantida dowladda ee loogu adeegaayey shacabka oo ay reebanaato in loo geysto xatooyo ama si kale loo xalaaleysto.
Shacabka Puntland waxaan ugu baaqayaa in ay xil iska saaraan ilaalinta iyo sugidda amniga xilliga kala-guurka ah, in ay meel uga soo wada jeestaan cidkasta oo nabadda waxyeelo ku ah. Waxaa la gaarey xiligii runta, waxaa laga soo gudbey ballan qaadyo iyo himilooyin dhalanteed noqday, waxaan ugu baaqayaa shacabka iyo Xildhibaanadu in ay ka fiirsadaan masiirkooda, lana gaarey xiligii la dooran lahaa qof leh KARTI waxna ku maamuli kara HUFNAAN”